Tahriibayaal laga soo badbaadiyey badda Mediterranean - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka ANTHONY JEAN/SOS MÉDITERRANÉE
Image caption Tahriibayaasha waxay inta badan ku safraan doomo yaryar oo halis ah.
Markab samata-bixin ayaa ku soo xirtay dekedda Sicily, isagoo sida 606 tahriibe oo in ka yar laba maalmood ku jiray badda, meel u dhow xeebaha Libya.
Waxay u kala dhasheen 20 dal oo Afrikaan iyo bariga dhexe ah. Kooxda gargaarka ee SOS Méditerranée ayaa sheegtay inay ku jireen 241 ilmood iyo 11 haween oo uur leh.
In badan oo ah dumar ka yimid dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaaraha waxay sheegeen in xadgudubyo galmo la xiriira ay ka soo carareen. Tahriibayaasha qaarkood ayaa waxaa ka muuqday nafaqo darro.
50 dadkaas ka mid ah waxay u soo qaxeen Libya, ayagoo ka soo cararay dagaallada ragaadiyey Suuriya, hase yeeshee qalalaasaha wuxuu sidoo kale baabi'iyey Libya.
Qulqulka tahriibayaasha aan joogtada ahayn ee imaanaya koofurta Yurub, ayagoo ka soo tallaabaya badda Mediterraneanka, ayaa aad uga hooseeya tiradii 2016. Laakin Talyaanigu wuxuu la daalaa dhacayaa mushaakilkaas, ayadoo tahriibayaasha badidood ay badda ka soo galayaan.
Suuriyaanka la soo badbaadiyey waxaa ku jira qoys dhan oo wada socda iyo laba dumar ah oo bilo dhamaystay.
Image caption Aquarius waa NGO dadka ka soo badbaadiya badda
Markabku wuxuu iminka joogaa Palermo, halkaasoo muhaajiriinta ay baaritaan ku marayaan, si loo ogaado kuwa iyaga ka midka ah ee magangalyada weydiisan kara.
Waddamada ay asal ahaan ka soo jeedaan muhaajiriintaas waxaa ka mid ah Masar, Sudan, Eritrea, Mali, Ivory Coast, Guinea Bissau, Nigeria, Ghana, Gambia iyo Yemen.
SOS Méditerranée waxay sheegtay in isu dhiganka carruurta la soo badbaadiyey ay 10kii qofba ka noqonayaan 4, taasoo ah tii ugu badnayd ilaa wakhtigan.
"Waxay ka soo carareen qaska, iyo jawiga guud ee nabad galyo darrada iyo dagaallada Libya" ayuu yiri guddoomiyaha hay'addaas Francis Vallat.
Hay'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay, UNHCR, ayaa iyana sheegtay in wadarta guud ee tahriibayaasha badda isku soo biimeeyey sannadkan ay dhan tahay 142,180, kuwaasoo 107,982 ka mid ah ay Talyaaniga gaareen.
Tirada gaartay Giriigga, oo markii hore ahaa halka ay muhaajiriintu Yurub ka galaan, ayaa ah 20,931.
Hay'adaha aan dawliga ahayn ayaa ka cabanaya in dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub aysan si wanaagsan ugu qalabaysnayn dadaallada gurmadka, ayadoo kooxaha dadka tahriibiya ay ku baadaan muhaajiriinta Libya. Tacaddiyada galmada ee loo gaysto dumarka muhaajiriinta ah iyo weerarrada kale ayaa la sheegay inay halkaa ku badan yihiin.